MCare - Mpanamboatra Million
Serivisy fifindra-monina: 22156. Serivisy ara-dalàna: 19132. Tolotra IT: Tetikasa 1000+ Tetikasa manompo: 26742. Mbola manisa.
dingana 1 : Fantaro ny filan'ny tsirairay / fianakaviana / orinasa.
dingana 2 : Fisafidianana ireo tombontsoa / safidy tsara indrindra hanatanterahana ireo tanjona kendrena sy tanjona kendrena.
dingana 3 : Mandefa safidy tsara indrindra hahazoana fankatoavana.
dingana 4 : Raha azo atao, fanaraha-maso ny fitsidihana ny firenena, raha mbola tsy eo.
dingana 5 : Halalino ny azo atao.
dingana 6 : Torohevitra momba ny kaonty sy haba, raha azo ampiharina.
dingana 7 : Topimaso sy fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny fotoana mety azo atao.
dingana 8 : Fanaraha-maso mandritra izany.
dingana 9 : Fanomanana sy fandefasana amin'ireo manampahefana voakasik'izany.
dingana 10 : FAHOMBIAZANA!
Etazonia (28 Firenena)
Tsy manohana na manome ny serivisy amin'ny sokajy voatanisa etsy ambany ho an'ny olon-tsotra sy / na orinasa izahay